आखिर हामीले किन घर भित्र भाइरस हुलेर ढोका बन्द गर्यौ ? « Naya Bato
आखिर हामीले किन घर भित्र भाइरस हुलेर ढोका बन्द गर्यौ ?
देशभर नयाँ संक्रमितको संख्या सार्वजनिक गरिँदा असोज लागेपछि राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या पचासप्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ।
यसरी काठमाडौंमा विस्फोटक रुपमा कोरोना संक्रमण कसरी फैलियो? प्रश्न उठेको छ। तथ्य हेर्दा मुख्य दुईवटा कारण देखिन्छन् उपत्यकामा कोरोना भाइरस समूदाय स्तरमा फैलिनुमा। पहिलो कारण सरकारको रणनीति र दोस्रो हामी जनताको बानी।
सरकारको रणनीति कसरी यसको कारक हो भन्ने बुझ्न अलि अगाडि जानुपर्छ। नेपालमा दोस्रो कोरोना संक्रमित देखिएसँगै चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउन १२० दिनपछि साउन ६ गते हटाउने निर्णय भएको थियो। साउन ६ गते नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १७ हजार ९९४ रहेको थियो।
उनले आफ्नो दावीलाई तर्क दिन काठमाडौंमा लकडाउन अन्त्य भएपछि क्वारेन्टिन बस्ने व्यवस्था नगरिएको र देशभित्र ओहोरदोहोर निकै बढेकाले त्यसैबेला कोरोना समूदाय स्तरमा फैलिएको बताउँछन्।
लकडाउनको अवधिमा पनि लकडाउनको कडाईँका साथ पालना नभएको र लकडाउन अन्त्यपछि मानिसहरु घरबाहिर अनियन्त्रित रुपमा बाहिर निस्कँदा कोरोना फैलिएको डा पुनको भनाई छ। उनले त्यो बेला उपत्यकामा क्वारेन्टिनलाई कडाई गरेको भए अहिले अवस्था टार्न सकिने विश्वास गरे। उनले भने, लकडाउन अवसर हो।
अवसरको उपयोग भएन। यो अवसरको उपयोग नहुँदाको परिणाम देखिएको छ। अरु देशको उदाहरण हेरेर यहाँ त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। आफ्नै मौलिक मोडालिटी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
दोस्रो कारक हामी आफै हौं। चैतमा शुरु भएको लकडाउन सकेसम्म मानिसहरुले पहुँचका आधारमा उल्लंघन गरे। माक्स, स्यानिटाइजर र सामाजिक दूरीको पालना गरिएन। डा. पुन भन्छन्,
पहुँचका आधारमा लकडाउन उल्लंघन गरियो। ढाँटियो। आखिर हामीले कसलाई ढाँटेका रैछौं, आफैलाई? उनले भने जस्तै हाम्रो बानी पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सहयोगी नभएर फैलाउन सहयोगी बन्दा काठमाडौंलगायत देशभर कोरोना संक्रमण विस्फोटक रुपमा फैलिएको छ।
अझ आउँदैछ झन संकट
कोरोना भाइरस संक्रमणको गति तिब्ररुपमा फैलिएका बेला नेपालमा दुईवटा संकटले दस्तक दिनै लागेका छन्। चाडबाड र चिसो मौसम